AKHRISO:- Maxaa Natiijo ah oo kasoo baxay shirkii saacadaha Badan usocday Axmed Madoobe iyo Deni?. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
AKHRISO:- Maxaa Natiijo ah oo kasoo baxay shirkii saacadaha Badan usocday Axmed Madoobe iyo Deni?.
War-murtiyeedkii ayaa goor dhow laga soo saaray Shirka Iskaashiga Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka ee Puntland iyo Jubbaland, Shirkaasi oo (January 18-19, 2020) ku socday magaaladda Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
War-Murtiyeedka oo ka kooban 16 qodob ayaa looga hadlay iskaashiga Jubbaland iyo Puntland,Khilaafka dhexeeya Dowladda Faderaalka Soomaaliya iyo Maamuladda Jubbaland iyo Puntland.
Previous articleCiidamada Puntland oo xabsiga dhigay Masuuliyiin katirsan Wasaradaha oo lagu helay Tuhuno waawayn.
Next articleAqalka Sare ee Somalia oo Anisixiyay sharci muhiim ah oo xakamaynta Dhalinyarada ciidanka ah ee la dalacsiiyo.
Taajka Maakhir January 20, 2020 At 8:28 pm
War korneyle aad baan kuu salaamay marka hore. Hadda uun baan si kedis ah uga dul dhacay farriintii aad bog hore iigu dhaaftay aniga oo ku filahayn.
Korneyle xerteenan Marqaan baa aniga maamuus iigu filan oo wallaanan Villa Xalane iyo Villa Garoowe toona hunguri iga galin. Waayo adduun baan la maqnaa laakiin muddo yar hadda Marqaan waan ku soo laabtay. Adiga xataa markii aan Marqaan kaa waayay ayaan maalin dhawayd meeshan kugu yar xantay oo aan u maleeyay in aad nooga faanayso calaashaan waad soo cumreysatay.
Suldaankeena Karaamada huwan Dab La Ridey aad ayuu u fiican yahay oo isaga na hawlo adduun baa ku soo furmay oo Imaaraadka iyo Maakhir ayuu u dhexeeyaa laakiin dhawaan waxaan filayaa in uu London ku soo waajahan yahay Eebbe idamkii.
Baabkii aad nagu furtay ee ku saabsanaa Hartiga Woqooyi waynu isla falanqeyn doonnaa labadeennu haddii uu Allaha Qaadirka ahi noo saamaxo. Laakin seeftaada galka kala sii bax korneyle!